अष्ट्रेलियामा पत्ता लाग्यो सेक्सपछिको यस्तो नयाँ कुरा - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा पत्ता लाग्यो सेक्सपछिको यस्तो नयाँ कुरा
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ भाद्र २०७३, शनिबार ०३:४० |
मेलबर्न । अक्सर हामीले सेक्स पछाडि पुरुषहरु थाक्छन् भन्ने कुरा सुन्दै र अनुभव गर्दै पनि आइरहेका हुनसक्छौं । तर यौन सम्पर्क पछाडि महिला निराश बन्ने गरको कुराहरु हामीले कमैमात्र सुनेका हुन सक्छौ । किन की वीर्यस्खलन पछाडि थकित पुरुषले महिलासँग अन्तरंग गर्ने गरेका नपाइने विभन्न अनुसन्धानले देखाउँदै आएका छन् ।
त्यसकारण पनि अधिकांश पुरुषहरुले यौनसम्पर्कपछि महिलासँग सहवासको अनुभव साट्ने गर्दैनन् । जसले गर्दा सहवासमा साथ दिइरहेको आफ्नो पार्टनरले सेक्स पछाडि के सोचिरहोला ? उसलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्नेमा पुरुषहरुले हेक्का राख्दैनन् ।
तर एउटा अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानले यौन सम्पर्क पछि महिलाहरु निराश हुने गरेको पत्ता लगाएको छ । त्यतिमात्र होइन सेक्स पछाडि त्यसरी महिलाहरु निराश बन्नुका केही कारणहरुसमेत निक्र्यौल गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्ड यूनिवर्सिटी अफ टेक्नोलोजीले गरेको अनुसन्धान अनुसार यौन सम्पर्कको क्रममा चरमसुख, अत्यधिक आनन्दको अनुभुतिसंगै निराशा पनि एक प्रकारको भावनात्मक अभिव्यक्ति हो । सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखिसकेपछि पनि धेरै महिलाहरुमा निराशाको भावना जन्मिन्छन् र यो ‘मनोवैज्ञानिक समस्या भएको अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाई छ । २ सय ३० महिलाहरुमाथि गरिएको अनुसन्धानमा धेरै महिलाहरुले सेक्सपछि तनाव र निराश महसुस गरेका थिए ।
कयौं महिलाहरु यौन सम्पर्कपछि बाथरुममा रुने पनि गरेको अनुसन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन् । कुनै–कुनै महिलाहरुमा यो समस्या धेरै रहेको र कुनैमा थोरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्क पछि आफ्ना साथीलाई निकै ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
तपाई जति सेक्समा रमाउन खोज्नु हुन्छ त्यति नै सेक्स पछि पनि आफ्ना पार्टनरसंग समय विताउन जरुरी छ । यसले मात्र तपाईको जीवन सबैतिरबाट सफल र सुन्दर बन्न सक्छ ।
Nextदिल्लीले मन्त्री महतलाई अचानक बोलायो,आइतवार जाने
किन घट्दैछ मलेखुको माछाको आकर्षण ?
२ भाद्र २०७३, बिहीबार १५:३९
२ श्रावण २०७३, आईतवार १५:५४
५ श्रावण २०७३, बुधबार १६:०२
भाडाका आमा धन्दामा संलग्नहरुको रुवाबासी
२५ श्रावण २०७२, सोमबार १६:३६